Sooyaalka Maalinta Jacaylka Adduunka Iyo Halista-Diimeed. W/Q: Cali Cabdi Coomay
(Hadhwanaagnews) Tuesday, February 12, 2019 16:38:52
14 Febarweri sannad kasta waa maalinta ugu gogol-dhaafka badan adduunka, marka la eego xafladaha iyo kulanka dhexmara
Sidoo kale wuxuu mamnuucay guurkii, si meesha looga saaro in kuwa xaaska
lihi aanay ku mashquulin, kuwa doobabka ahina aanay u hungurayn wax guur ah.” Ka dib nin Baadari ahaa sidoo kalena ahaa wasiirka Diinta iyo xidhiidhka Kiniisadaha oo la odhan jiray “Valentine” oo ka tirsanaa maamulka Boqorka, markiisii horana ahaa nin dumarka iyo gogol-dhaafkoodu madax maray iyo nin kale oo isna la odhan jiray Saint Marius, ayaa si hoose uga soo horjeestay amarkii Boqorka. Waxa aanay bilaabeen inay shirar qarsoodi ah la yeesheen dhallinyaradii guur-doonka ahayd, waanay isu-guurin jireen. Dhaqdhaqaaqii qarsoodiga ahaa ee ay horkacayeen Badari Valentine iyo kaaliyihiisii Saint wuxuu keenay inay si qarsoodi ah isugu guuriyaan dhalinyar badan, sidoo kale ay sameeyeen xidhiidh saaxiibtinimo dhallinyarta dhexdeedii, iyaga oo jebinayaa xayiraadii uu saaray Boqor Claudius Labaad, ee aan racfaanka laga qaadan karayn.
Halista-Diimedd Ee Maalintan